के धर्तीमा पानी सकिँदैछ ? | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १५, २०७८ chat_bubble_outline0
एक आकलनअनुसार २०५० सम्ममा विश्वको आधा मानव बस्ती यस्तो इलाकामा हुनेछ, जहाँ जल सङ्कट हुनेछ । यस समयसम्म दुनियाँको ३६ प्रतिशत सहरहरूमा पानी अभाव हुनेछ ।
केही महिनाअघिको कुरा हो । इरानमा अभूतपूर्व खडेरी देखियो । वर्षाको कमीका कारण यहाँका नदीहरू सुके । पानीको कमीका कारण पूरै देशमा ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो ।
वर्ष २०१९ मा भारतका सबैभन्दा ठूला सहरहरूमध्ये एक चेन्नईमा देखिएको पानीको सङ्कटले अखबारहरूमा ठूलो चर्चा पायो । बढ्दो सङ्ख्याका उद्योग, सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनको असरले कसरी कहर बढाउँदैछ भन्ने विषयमा पनि यतिबेला बहस छेडियो ।
भीषण खडेरीकै कारण दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउन सहरमा २०१८ मा प्रतिव्यक्ति दैनिक ५० लिटर मात्रै पानी प्रयोग गर्न पाइने मापदण्ड लागू गरियो । २०१४ मा ब्राजिलको साओ पाओलो र अस्ट्रेलियाको पर्थमा पनि अवस्था यस्तै थियो ।
जल सङ्कटका लागि खराब व्यवस्थापन, जलस्रोतहरूमा लगानीको कमी र जलवायु परिवर्तनलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने गरिएको छ । तर न यो कुनै समस्या हो, न त कुनै कारण नै हो ।
१९८० को दशकदेखि दुनियाँमा पानीको प्रयोगको दर प्रतिवर्ष लगभग एक प्रतिशतले बढिरहेको छ । र, २०५० सम्म यही दरमा बढ्ने आशा गरिएको छ । जानकारहरूका अनुसार आगामी समयमा पानीको माग र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दा जलस्रोतहरूमाथि दबाब बढ्नेछ ।
के त्यसो भए धर्तीबाट पानी खतम भइरहेको छ ? यो समस्याको हल कसरी हुनसक्छ ?
दुनियाँको कुल आवादीको १७ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा भारतमा छ । तर यहाँ धर्तीको ताजा पानीको स्रोतको केवल ४ प्रतिशत मात्रै छ ।
सम्राट बजाक वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युटमा भारतको सहरी जल कार्यक्रमका निर्देशक हुन् । उनका अनुसार हालैका वर्षमा मानिसहरूको आय उच्च रूपमा बढेको छ र पानीको माग पनि त्यहीअनुसार छ । ‘मानिसहरू एयर कन्डिसनर, फ्रिज, वासिङ मेसिनजस्ता उपकरण अधिकभन्दा अधिक खरिद गरिरहेका छन् । देशमा बिजुलीको कुल आवश्यकताको ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै थर्मल पावर प्लान्टबाट आउँछ र यसमा पानीको अधिक प्रयोग हुन्छ । यदि बिजुलीको प्रयोग अझै धेरै भयो भने यसको उत्पादनका लागि पानीको माग पनि उति नै बढ्नेछ ।
सम्राटका अनुसार आयसँगै मानिसहरूको खानपानको तरिका पनि बदलिरहेको छ । प्रोसेस्ड फुडको खपत अधिक भएको छ र पहिलेको तुलनामा पानीको जरुरत पनि बढेको छ ।
यसबाहेक सहरीकरणको बढ्दो दायरा र वर्षाको पानी बर्बाद हुनु पनि ठूलो समस्या हो । भारतमा खानेपानीको कुल आवश्यकताको ८५ प्रतिशत भू–जलबाट पूरा हुने गरेको छ ।
‘सहरीकरणको तरिका बदलिँदै छ । जमिनको सतहमा कङ्क्रिट ढलान ओछ्याइएको छ र यसले सतहलाई कडा र अभेद्य बनाएको छ । त्यस्तै जङ्गल कटानले पनि जमिनलाई कम्प्याक्ट गरिरहेको छ । त्यसकारण जमिनले पानीलाई सोस्न पाइरहेको छैन र बर्खाको पानी बगेर सिस्टमबाट बाहिर गइरहेको छ ।’
देशका झन्डै ७९ प्रतिशत घरसम्म पिउने पानीको नल पुगेको छैन । धेरै इलाकामा मानिस पानी खरिद गर्न बाध्य छन् । देशमा प्रदूषित पानीबाट हरेक साल झन्डै दुई लाख जानको मृत्यु हुन्छ र हजारौँ मानिस बिरामी हुन्छन् ।
जल सङ्कटबाट परिवार त प्रभावित नै छन्, यसको असर समाजमा पनि परेको छ । ‘जल सङ्कटले मानिसलाई कहिल्यै खतम नहुने गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिदिन्छ र समाजमा असमानता बढाउँछ । सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएका मानिसले पानीमा अधिक खर्च गर्न पाउँदैनन् । यसको असर उनीहरूको स्वास्थ्यमा पर्छ र उनीहरू यस दुष्चक्रमा फस्छन् ।’
पानीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयले यसमा फरक पार्ने उनले बताइन् । मसलन खेत ठूलो भए, वाष्पीकरण अधिक हुनेछ । घरमा प्रयोग भएको पानीलाई फ्याक्दाँ त्यो बग्नेछ र जलचक्र चल्नेछ । तर न त भू–जलस्तर बढ्नेछ, न अर्कोपटक प्रयोगका लागि पानी उपलब्ध हुनेछ । ‘प्रदूषण पनि एक ठूलो समस्या हो । यदि पानी छ तर प्रयोग गर्न लायक छैन भने त्यो नहुनु बराबर हो । पानीसम्मको पहुँचका लागि ढाँचागत सुविधा पनि महत्त्वपूर्ण छ । पानी कति छ र कतिवटा घरसम्म पुग्नेछ, यो महत्त्वपूर्ण फैसला हुनेछ । थप अभावले पनि असमानता जन्माउँछ,’ उनले भनिन् ।
केटको बुझाइमा आगामी समय पनि धर्तीमा पानी सायद खतम हुनेछैन तर बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण चुनौतीहरू बढ्ने निश्चित छ ।
एकपछि अर्को गाउँ किन हुँदैछ खाली ?
‘यो रोचक प्रविधि पक्कै हो । तर आजको अवस्थामा पानीसँग नुनलाई अलग गर्ने प्रक्रिया महँगो छ । ऊर्जाको प्रयोगको दृष्टिले पनि यो सही छैन । किनकि ऊर्जा सङ्कट पहिलेदेखि नै ठूलो मुद्दा रहिआएको छ,’ डेनियलले भने ।
अर्को, एउटा प्रश्न यस प्रक्रियाबाट बन्ने नुनलाई के गर्ने भन्ने पनि हो । यसलाई न जमिनमा फ्याक्न सकिन्छ, न समुन्द्रमै ।
सानो कोसिस, ठूलो परिवर्तन
‘साना साना काम मिलाएर ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । ठूला बाँधहरूको सुरुवात विस्थापनबाट हुन्छ । साना परियोजनाहरूमा यस्तो हुँदैन । ११ हजार ८ सय साना परियोजनाहरूले १० हजार ५ सय वर्ग किलोमिटर इलाकाको पर्यावरणलाई हराभरा गर्नसक्छन् । तर एउटा ठूलो बाँधले यस्तो गर्न सक्दैन ।’
अब पुरानै प्रश्नमा फर्कौं : के धर्तीमा पानी खतम भइरहेको छ ?
जलवायु परिवर्तन, खराब व्यवस्थापन, जलस्रोतहरूको घट्दो सङ्ख्या र लगानीको कमी : कुनै न कुनै स्तरमा यी सबै कारण समस्याका लागि जिम्मेवार छन् । तर जानकारहरूका अनुसार मुद्दा पानी सकिने विषयको होइन, बरु त्यससँग मानिसहरूको सम्बन्ध समाप्त हुनेबारेको हो ।
#जलवायु परिवर्तन#water scarcity
जानी राखौँ : कुन दिवस कहिले ?